Isitolo esidayisa yonke impahla 140cm Ithebula le-Gamer elinemilenze ye-T shpe nephedi yegundane Imodeli LY 140cm Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-TwoBlow
Ithebula le-Gamer elingu-140cm elinemilenze ye-T shpe ne-model pad Model LY 140cm
Ifenisha Finish:I-carbon fiber
Ilula yesimanje futhi iqinile ukuze uthole ulwazi olungcono lokudlala!
1. Izibani ze-LED zedeski lokudlala zidala isimo sokudlala esingavamile.
2. Ideskithophu ebanzi yamayintshi angu-55 ithebula lokudlala lanele ukubeka amamonitha ama-3.
3. Ideskithophu ye-MDF ebushelelezi ayingeni emanzini futhi ayikwazi nokuklwebheka.
4. Uhlaka olumise okwe-T lwedeski lemidlalo yekhompyutha luzinzile futhi luqinile.
5. Ayikho ibha evundlile ngaphansi kwetafula ukuvikela imilenze yakho ekuthintekeni ngengozi.
6. Yonke imiklamo ine-ergonomic futhi inemisebenzi eminingi.
I-RGB Gaming Desk
Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi siyaklama futhi senza amadeski emidlalo angcono kakhulu e-Amazon.Siphethe imboni yethu yokukhiqiza esiziqhenyayo ngemiklamo yethu emisha, ukuhlola okuqinile kanye nenqubo yokukhiqiza esezingeni lomhlaba.
55 Intshi Ideskithophu Enkulu
Beka leli deski lemidlalo elisebenzayo ekamelweni lakho lemidlalo, ikhaya, ihhovisi, indawo yokusebenza, ukufunda, igumbi lokuhlala, nanoma yikuphi lapho ofuna ukudlala khona, yenza kube ngokwakho indawo yakho yokusebenza yamageyimu ngaleli deski lemidlalo.
• Idizayini Emise Okuka-T: Ukwakhiwa Okuqinile Nokuqinile
• Usayizi Wedeski: 55” (W) x 23.6” (D) x 29.5” (H) / 140*60*75cm
• 8 RGB Lighting Modes
• Kulula Ukuhlanganisa
• Iphedi legundane ledeski eligcwele
• Izinyawo zedeski ezilungisekayo
• Ithebula lethawula le-carbon fibre laminated: lingangeni manzi, linganqamuki
• Ihuku le-headphones elula & isibambi senkomishi & nesistimu yokuphatha ikhebula
ILAWULWA UKUKHANYA KWE-RGB FIBER OPTIC
1. Idizayinelwe abadlali bamageyimu: Iphaneli yedeski lemidlalo ye-TwoBlow iza nezibani eziholayo ze-fiber optic rgb, idala indawo yokudlala egxilile.
2. I-Ultra-High Quality Material: I-Optical core material embozwe ngepulasitiki yobunjiniyela ekwazi ukunqanda ilangabi enamandla amakhulu engaqinisekisa ukuthi ngeke kube nezinkinga zekhwalithi njengokuphuka nokuwohloka isikhathi eside.
3. Izinketho Zemodi Yokukhanyisa Eziningi: Imibala Eyodwa Eyisi-8, Ukushintsha Kwemibala Eyodwa Eyisi-8, Ukushintsha Kwezibani ze-RGB & Ukukhanyisa Kwe-Strobe.
4. Ikhwalithi Kuwo Wonke: Nge-Carbon Fiber Surface kanye nokukhanya kwe-RGB LED ukuveza ubunikazi bomdlali wakho, i-TwoBlow iyiprimiyamu ngaphakathi nangaphandle.
Sisonke Isitayela sokudlala
Ideski lamageyimu le-TwoBlow lihlanganisa okubonakalayo kube okwangempela, guqula inganekwane ibe yimpilo, vumela wonke umdlali azitike emhlabeni wegeyimu, vumela wonke umdlali ajabulele umhlaba wegeyimu ngisho nalapho ekhaya.
Ideski Lehhovisi Lasekhaya
Dala indawo yehhovisi ekahle ngedeski lokudlala le-ESGAMING.Ingaphezulu ledeski elonga isikhala linikeza indawo eningi yokuqapha noma ikhompuyutha ephathekayo, kanye namaphepha nezinye izinto ezibalulekile zasehhovisi.Idizayini esesitayeleni yenza leli deski libe ukwengeza okuphelele kunoma yiliphi ihhovisi lasekhaya.
Umuzwa ongcono wokusebenza
Indawo yokusebenza eguquguqukayo ikuvumela ukuthi ube nesipiliyoni sokusebenza esingcono.Inciphisa ingozi yobuhlungu beqolo, isifo sikashukela, izinkinga zenhliziyo, ukukhuluphala nezinye izinkinga ezingokomzimba kuyilapho ushintsha phakathi kokuhlala nokuma.
I-Cable Management Grommets
Inezimbobo zokuphatha ikhebula ezingu-2 kwesokunxele nakwesokudla, zilungele ukufakwa kwekhebula
Izalelwe ukudlala, leli desiki lokudlala likunikeza indawo yokudlala elula nendawo yokusebenza.
• 1 x Ideski Lemidlalo ye-RGB
• 1x Iphedi Yegundane Elimbozwe Ngokugcwele
• 1x Umbambi wendebe
• Ihuku le-headphone ye-2x
• 1x Isitoreji Sezinto
• 1 x Imbobo ye-USB
• 1x Ithuluzi lokufaka
• 1x Faka iphepha leziyalezo
Ubukhulu bomkhiqizo 55 x 23.6 x 29.5 amayintshi/ 140*60*75cm
Isisindo sento 49 pondo
Umkhiqizi Ukushaywa kabili
Inombolo yemodeli yento I-LY140
Okwedlule: I-RGB Gamer Desk enemodeli yesilawuli kude i-ZA
Olandelayo: Imodeli yedeski lemidlalo yemidlalo engu-R i-GT-01
Ideski Lemidlalo Elimnyama
I-Diy Gaming Desk
Ithebula Lomdlalo Nezihlalo
Ideski Labadlali Bamageyimu
Ithebula lekhompyutha yokudlala
Ideski Lemidlalo Elinezibani Eziholayo
Ithebula le-PC yokudlala
Ideskithophu Lemidlalo Elihle
L Imidlalo Yedeski
UMnu Ironstone Gaming Desk
Ideski Lemidlalo Eliphinki
I-Rgb Gamer Desk
Ithebula le-Rgb Gamer
Ithebula Lemidlalo ye-Rgb
Ideski Lemidlalo Encane
I-Vitesse Gaming Desk
I-RGB Gamer Desk enemodeli yesilawuli kude i-ZA
Ideski Lemidlalo Eliphezulu Elinomumo ka-R Hlobisa Imilenze...
Ithebula Lemidlalo eline-RGB Model ZA-HC-Z
Ideski Lemidlalo Ngemodeli ye-RGB LY
Umumo ka-R wemilenze ye-aluminium imodeli yedeski lemidlalo ye-FM-JX-R